महिला नाम Polina आज धेरै लोकप्रिय भएको छ। यसलाई आफ्नो मालिकले कोमल वर्ण, दृश्य अपील र समृद्ध र सुन्दर जीवनको खोज छ दिन्छ। मान र नाम को विशेषताहरु यस लेखमा प्रस्तुत गरिनेछ।
नाम Pauline को मूल
Etymologically यो नाम Apollinaris को बोली फारम संग जोडिएको छ। यो नाम विभिन्न कारणहरूले गर्दा स्वतन्त्र भयो। पहिलो, ध्वनि "एक" शब्द को सुरुमा छैन Slavs एक विशेषता छ। त्यसैले उहाँले चाँडै ड्रप, र नाम Polynar रूपमा उच्चारण भयो। दोश्रो, मा फेसनमा 18-19 औं शताब्दीपछि फ्रान्सेली भाषामा आए। उल्लेखनीय मान्छे रूसी दिन प्रयास नाम विदेशी euphony। त्यसैले हामी Polina महिला नाम फँस।
नाम Apollinaris, बारी मा, फिर्ता पुरुष Apollinaris जान्छ। यसलाई अर्थ, ग्रीक विशेषण apollinarius देखि गठन भएको थियो "को अपोलो स्वामित्वको।" यो भगवान ओलम्पिक खेलाडीहरूलाई को Pantheon प्रवेश र सूर्यका को संरक्षक सेन्ट, साथै कला र विज्ञान छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, नाम Paulina को मूल लामो र रोचक इतिहास छ।
यो नाम फ्रान्सेली मूल को छ भनेर विश्वास गरिएको छ। यो ल्याटिन "बेब" वा "सानो" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ कि यो पुरुष पावलले आउँछ कि कल्पित छ। रूसी भाषामा यसको एनालग पावलले छ। धेरै नाम Pauline फ्रान्सेली महिला नाम Paulina (वा मयूर) को मूल विशेषता। यसलाई फिर्ता रोमन व्यक्तिगत वा सामान्य उपनाम Paulinus गर्न तिथिहरु। Pauline "सानो", "भद्र" को रूपमा अनुवाद।
को संरक्षक सेन्ट
यस्तो नाम को धारकों को संरक्षक सेन्ट को Reverend Apollinaris हुन मानिन्छ। लागि जानिन्छ यो महिला वैवाहिक इन्कार र पवित्र ठाउँमा एक तिर्थयात्रा गयो भइरहेको। पछि, अलेक्जेन्ड्रिया मा, त्यो पुरुष लुगा मा, लुगा एक भिक्षु हुन pretended र मिश्र को सेन्ट Macarius को आदेश थियो जो विहारको, आए। Apollinaris Dorotheos आफु भनिन्छ, र आफ्नो भाइ उनको लिए।
Pauline नाम, मूल र मूल्य यस लेखमा छलफल गरिएको छ जो पवित्र बाइबल इतिहास संग जोडिएको छ। यसलाई आमाबाबुले Apollinaria अर्को छोरी थियो भनी उल्लेख। त्यो पागलपन भोगे। दासी पूर्ण उपचारको लागि Macarius गर्न विहारको पठाइएको थियो। भिक्षु Dorofei प्रार्थना त्यहाँ पूर्ण निको हुन्छ। तर घर शो आमाबाबुले गर्भावस्था फिर्ता मा। तिनीहरूले जारी दोषी नही माग र Dorofei (Apollonia) को दोष लिन थियो। त्यो घर फर्के र परिवार खुलेको छ। चाँडै त्यो मिश्र को Macarius फर्के र परमेश्वरको सेवा गर्न उनको जीवन समर्पित छ। केवल भिक्षु को मृत्यु पछि Dorotheus भाइहरूले उहाँले वास्तवमा एक महिला थियो सिके। सेन्ट Apollonia को भोज दिन - 18 जनवरी मा।
एक बच्चाको रूपमा Pauline
Polina - बालिका लागि नाम कोमल र अनुकूल स्वभाव अलग छ। त्यो निरन्तर आफ्नो सम्पूर्ण परिवार को ध्यान घेरिएको थियो। यो नाम को मालिक अक्सर बिरामी, धेरै समय आफ्नो आमा, केटी मा एक ठूलो प्रभाव पार्न गर्ने नजिक छ। स्कूलमा, Pauline - आज्ञाकारी, studious र सुग्घर बच्चा। यो सबैभन्दा सफल विद्यार्थीहरूको बीचमा छ। तथापि, Pauline अझै पनि आफ्नो साथीहरूको खेल्न रुचाउँछु। त्यो कठिन समयमा समर्थन गर्न सक्छन्, धेरै मिलनसार छ। केटी सधैं मित्र को धेरै छ। , प्ले खेल विभिन्न रचनात्मक सर्कल भ्रमण: Pauline बहुमुखी व्यक्तित्व बढ्छ। सामान्य मा, यो धेरै, राम्रो आज्ञाकारी र उत्तरदायी बच्चा छ।
धेरै गर्न चासो छ जो Pauline नाम, मूल र मूल्य, यो बौद्धिक र गणना मानिसको रूपमा आफ्नो possessor characterizes। एक युवा उमेर ले त्यो जीवन स्पष्ट प्राथमिकता छ। सबै को सबै भन्दा त्यो सान्त्वना र बलियो, नजिक-बुनना परिवार मा रुचि छ। Pauline लागि पेशा को विकल्प - छैन मुख्य कुरा। यस सन्दर्भमा, यो आफ्नो परिवार को वरिष्ठ सदस्य को राय सुन्न सक्छ र मनोवैज्ञानिक, paramedic, वा शिक्षक बन्न। उनको काँध फरक "महिला" व्यवसाय। Pauline पेसा बनाउन खोज्नु छैन। त्यो काम मान्यता प्राप्त वा उच्चतम कार्यालय कब्जा गर्न कुनै आवश्यकता छ। बलियो र शक्तिशाली मानिसको काँध छेउमा - उनको युवा पहिले नै, त्यो उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा को लागि भनेर बुझ्छ।
Pauline नाम वर्ण यसको possessor एक अविश्वसनीय आकर्षण दिन्छ। आकर्षक नाजुक र स्त्री महिला पुरुष लागि चुम्बक छ। यो केवल सबै भन्दा राम्रो महिला गुण संग endowed छैन, तर तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ लाभदायक। हुनुको प्रकृति द्वारा एक coquette, त्यो उनको प्रशंसक मा प्रेम हृदय खेल्छ। तर त्यो उनको लायक थाह छ र अनावश्यक जोखिम आफ्नो प्रतिष्ठा पर्दाफास गर्दैन। Pauline क्षणिक romances रोचक छैन। आर्थिक र बौद्धिक विकास, Pauline सजिलो धेरै धनी परिवारको सदस्य बन्न। र यो क्षण मा साँचो आउन सिर्फ उनको सपना दुई: उनले विवाह र एक धनी घर को Mistress बन्नेछ। एक साथी, Pauline बारेमा, कुनै पनि मानिस मात्र को सपना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक भावुक साझेदार, एक विश्वसनीय पति, एक मायालु आमा र thrifty गृहिणी छ।
Pauline Arkady, बोरिस Averyanov, अल्फ्रेड, Makar, निकोलस, रबर्ट, Trofim एरिक Rodion, रबर्ट Egorov, दिमित्री Glebov, Vsevolod, Vadim र निर्दोष पुग्न महसुस अधिकतम बल।
टिकाऊ विवाह त्यो याकूबले रोमन, Tikhon एरिक Rodion, Kozma, Hilarion, Zahara, यूजीन दानियल, Vsevolod, भिक्टोरिया, बिन्यामीन, तुलसी प्रणय, bogdan, Arseny, Arkady, अनातोली संग सिर्जना गर्न सक्छ।
एक विफलता Pauline Akim, Jaroslaw जूलियन, Fedor, Stanislav, ओलेग, Nikita Naumov, लूका, इगोर, Demyan जर्ज, व्लादिस्लाव, Vilen, आर्थर Anton, एन्ड्रयू, को संघ हुन सक्छ अल्बर्ट, अलेक्जेन्डर।
तपाईं नाम Pauline को मूल अब एक गोप्य छ। यसलाई कुनै पनि केटी यो एक सुखी परिवार जीवन र राम्रो-जा दिन्छु फिट हुनेछ।
एक obsidian के हो? obsidian को प्रकार, एक जादुई र औषधीय गुण
Arslan: नाम मान, विशिष्ट गुण
मूल्य र Andrei को विशेषताहरु
जो भाग्य भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ
फिल्म "एक पटक एक समयमा प्रांतमा": अभिनेताहरूले देखाए कि उनि दूरस्थ स्थानहरूमा कसरी बस्छन्
जौ porridge पकाउने पानी कसरी र दूध संग
थिचिएको वा सुकेको खमीर कसरी चयन गर्ने?
कसरी कुराहरू राख्न, त्यसैले तिनीहरू चोट प्राप्त छैन
"ओजोन यात्रा": साइट सेवाहरूमा समीक्षाएँ आरक्षण र Ticketing
"Laktofiltrum" स्तनपान: निर्देश पुस्तिका, समीक्षा
"सुनको युवा" आज
"Vysotsky। अभिनेता र भूमिकाको: जीवित लागि "धन्यवाद